Ahoana ny fomba hanampiana ny fifandraisana amin'ny Nimbuzz
Nimbuzz: Ny fampiharana fampihetseham-panoheran'ny rehetra
Nimbuzz dia misy amin'ny fitaovana finday rehetra. Nimbuzz
Ny Nimbuzz dia sehatra mailaka mafonja izay manome karazana fampiasana mora ampiasaina, ary malalaka indrindra, fomba hifandraisana amin'ny ordinatera na fitaovana finday. Ny sehatra dia manome karazana endri-tsoratra, anisan'izany ny antso an-tariby (na any amin'ny tranokalam-pifandraisana sy finday, amin'ny sandany), fifanakalozan'ny vondrona, video chat, ary chat room.
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana manaraka ireto ny Nimbuzz
Nokia S60 sy S40
Raha te-haka sy hametraka Nimbuzz, tsidiho ity pejy ity ary fidio ny fitaovana.
Rehefa manana Nimbuzz navoaka sy navotsotra ianao, dia maniry hahita namana hiresahana.
Hanampy ny fifandraisana amin'ny Nimbuzz
Misy fomba maro azonao ampidirina ao Nimbuzz. Nimbuzz
Ny fomba tsara indrindra hanampiana ny fifandraisana amin'ny Nimbuzz dia eo amin'ny fitaovana finday. Koa satria manana kaonty ianao, dia hampifandraisina ny fampahalalana anao mba hahafahanao miditra ao amin'ny kaontinao sy ny tantaram-pirazanao ao amin'ny fitaovana rehetra amin'ny alalan'ny sonia. Afaka mampiditra fifandraisana amin'ny alalan'ny solosaina ianao, saingy ny safidy hitadiavana namana dia voafetra amin'ny fitadiavana ny anarany, izay mety ho olana (jereo eto ambany raha mila izany!)
Ahoana ny manampy ny fifandraisana amin'ny Nimbuzz amin'ny fitaovana finday
Afaho na avereno ampiharina ny app Nimbuzz ao amin'ny fitaovana findainao. Ilaina ny manamboatra fotoana iray hanavaozina mba hahazoana antoka fa mampiasa ny dikan-dingana farany ianao mba hahafahanao mahazo ireo karazana rehetra.
Sokafy ny app Nimbuzz
Tsindrio ny "Contacts" eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery
Tsindrio ny boribory manga amin'ny "plus" icon mba ahafahana miditra ao amin'ny sakafo hanampiana fifandraisana. Ireto safidy manaraka ireto dia hiseho.
Fonon-tsarimihetsika : Ireto misy safidy diso. Ny iray dia mihevitra fa hanana safidy hifandraisana amin'ny olona ao amin'ny adiresy an-telefaona amin'ny alàlan'ny Nimbuzz raha misafidy ity safidy ity ianao. Tamin'ny fitsapana azoko, dia afaka nijery ny fifandraisana tamin'ny findaiko aho, saingy nanana safidy ny hifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny antso an-tariby na ny fampiharana hafatra an-telefaona an-telefaona ny findainao. Nampiasa iPhone 6S aho. Tsy te hanome izany safidy izany aho.
Fikarohana mpinamana : Ity safidy ity dia ahafahanao miditra amin'ny boaty fikarohana izay ahafahanao manondro ny anaran'ny namanao. Mety ho olana anefa ny valiny, indrindra raha manana anarana mahazatra ny namanao. Maro ny valiny hita, ka sarotra ny mahafantatra hoe iza no namanao. Rehefa hitanao io olona io ao amin'ny lisitra anefa, dia mora ny manampy azy ireo ao amin'ny lisitry ny lisitrao amin'ny alàlan'ny pikantsary eo amin'ny sehatr'ireto "+" eo ankavanan'ny anaran'io olona io.
Asao ny namana : Miorina amin'ny fanandramana nataoko, mpankasitraka ahy fotsiny aho. Rehefa misintona ilay ikaonina ianao dia hisy safidy roa miseho: "Manasa SMS," ary "Manonta amin'ny mailaka." Ny fisafidianana ny safidy SMS dia nahatonga ny lisitry ny fifandraisako miseho, ary rehefa nidaroka tamin'ilay izay tiako ampiana aho, dia naseho tamin'ny safidy aho handefa hafatra ho an'io olona io amin'ny fampiharana fampihetseham-peo amin'ny findainao. Amin'ny fisafidianana ny mailaka anefa, dia nomena safidy aho handefa mailaka mivantana avy amin'i Nimbuzz, feno ny môdely efa nofenoina izay nanazava ny antsipirian'ny namany. Noho izany, mailaka safidy = tsara, safidy an-tsoratra = tsy tsara.
Ampio namana : Ity safidy ity dia manome fahafahana hanasa namana amin'ny anaran'ny Nimbuzz. Noho izany, mahafinaritra tokoa raha manana izany vaovao izany ianao, saingy tsy lehibe loatra raha tsy manao izany ianao.
Mahafinaritra ny mifampiresaka amin'ny Nimbuzz!
Navoakan'i Christina Michelle Bailey, 9/14/16
Ahoana ny fomba hamerenana ny mailaka vakiana ao amin'ny Outlook
Ahoana ny fampiasana ny mpanjifa Yahoo Messenger Web
Ahoana no hamoronana kaonty ProtonMail Free
Ahoana ny fomba ampiasana Yahoo Messenger tsy handefa App
Ampio ny fifandraisana amin'ny Google Voice
Mitondra ny hafatrao Facebook anao amin'ny fiainana
Ampiasao ny pejin'ny Express Outlook amin'ny solosaina samihafa
Ahoana ny fampiasana ny OkCupid IM
Ahoana ny fifandraisana amin'ny GROWLr
Teraka tamin'ny Teraka: azonao jerena ve ny Internet?
Torolàlana fohy ho an'ny Top 5 Alternatives amin'ny Skype VoIP Services
Ahoana ny fomba fampiasana Gmail amin'ny fiteninao
Fomba fanoratana ambony ambany / ambany
Bluetooth Headsets: Guide A Buying
Ahoana no hamahana Gpsvc.dll tsy hita na tsy fahitana diso
8 amin'ny lalao maimaim-poana indrindra ao amin'ny Windows Store
Ahoana no fomba hananganana Raspberry Pi
Sims Bustin 'Out Cheats sy Codes ho an'ny PS2
Ny 8 Guitars Electric Beginner Mpividy mba hividy amin'ny 2018
DVD Recorder Options Options (Antenna, Cable, etc)
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny Japoney sy Amerikana fanatanjahantena?
Ahoana no ahafahana miditra ny Free GMX Mail Account amin'ny Mac OS X Mail
Inona no atao hoe Amazon Cloud Player Service?
Ahoana no hanaisotra ny fonosina amin'ny Yahoo! Mail
Inona ny rakitra MSG?
Ahoana ny fomba hahazoanao teknolojia ho an'ny Hardware Zoom
Fanampiana bebe kokoa
Mianara mikasika Dynamic HTML (DHTML)